25 ka nabi ee ilaahey ku xusay quraan kiisa - Hoyga Aqoonta
Hoyga Aqoonta > Rukunka Diinta > Aqoonta Diinta
25 ka nabi ee ilaahey ku xusay quraan kiisa
Aqoonta Diinta Waa rukun lagu bandhigayo Aqoonta culimadeennu ay leeyihiin.
Qalabka mowduuca Qiimayn: Noocyada muujinta mowduuc
Nambarka Xubinka : 7
ka qayb galka: 61
Waxaa la qoray : [ 18-01-2012 ]
WALLAALIYAAL WAXAAN IDIN KU SALAAMAYAA SALAANTA MUSLIMKA
ASALAAMU CALEYKUM WARAXMATU ALLAAHI WABARAKAATUHU
WAXAAN JECLEESTAY IN AAN IDIN SOO GUDBIYO MAGACAYADA NABIYDA
OO UU ILAAHEEY KU XUSAY KITAABKIISA FURQAAN (ALQURAAN AL KARIIM)
1-Nabiyu Allaahi Aadam (C-S)
2- Nabiyu Allaahi Nuux (C-S)
3- Nabiyu Allaahi Ibraahiim (C-S)
4- Nabiyu Allaahi Ismaaciil (C-S)
5-Nabiyu Allaahi Isxaaq (C-S)
6-Nabiyu Allaahi Luudh (C-S)
7-Nabiyu Allaahi Huud (C-S)
8- Nabiyu Allaahi Saalax (C-S)
9- Nabiyu Allaahi Idiriis (C-S)
10- Nabiyu Allaahi Yuunis (C-S)
11- Nabiyu Allaahi Suleymaan (C-S)
12- Nabiyu Allaahi Daa´uud (C-S)
13- Nabiyu Allaahi Dulkifli (C-S)
14- Nabiyu Allaahi Yaxya (C-S)
15- Nabiyu Allaahi Zakariya (C-S)
16- Nabiyu Allaahi Isxaaq (C-S)
17- Nabiyu Allaahi Ayuub (C-S)
18- Nabiyu Allaahi SHuceeb (C-S)
19-Nabiyu Allaahi Yacquub (C-S)
20-Nabiyu Allaahi Yuusuf (C-S)
21-Nabiyu Allaahi Muuse (C-S)
22-Nabiyu Allaahi Haaruun (C-S)
23-Nabiyu Allaahi Dul-yasca (C-S)
24-Nabiyo Allaahi Ciise (C-S)
25-Nabiyo Allaahi Muxamed Khaatimul Anbiyaa Wa almursaliin(SCW)
Mowduucii hore : 25 ka nabi ee ilaahey ku xusay quraan kiisa -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: Maxammed Xamza
Saxiixa : Maxammed Xamza
Warqad gaara u dir Maxammed Xamza
Raadi qoraalladuu qoray/qortay Maxammed Xamza
Jawaabta: 25 ka nabi ee ilaahey ku xusay quraan kiisa
Aad iyo aad baad ugu mahadsantahay Maxammed oo aqoon baa i korodhay ah sida
oo aanan aqoon hore u lahayn ama aanan sheegeen haddaan tiriyo. Waxaa lagu darayaa Mowduucyada fadhiya oo loo soo noqon karo mar walba.Mar kale mahadsanid.
Runtii waa wax loo baahnaa aqoontooda iyo meel loogu soo hagaago in la helo.Fikrad aad u sarraysay ahayd..Mahadsanid Maxamed
Nambarka Xubinka : 192
ka qayb galka : 102
Mar walba wax iga yaabiyaad keentaa lana rabey in la barto.. aad baan kaaga mahad celinayaa
Warqad gaara u dir xusuuste1aad
Raadi qoraalladuu qoray/qortay xusuuste1aad
Runtii aqoon dheeraad ah yaad keentay golaha waanad ku mahadsantahay. Caajiska iska dhaaf Maxamed oo madaxa inoo miir ... Kkkk. Mahadsanid Maxamed Xamza
Nambarka Xubinka : 249
Taariikhduu xubinku is qoray golaha : Sep 2011
ka qayb galka : 126
Maxammed Xamza waa fikrad aad u sarraysa waana aad ku mahadsantahay.Nebiyada oo idil Calayhim Salaam. Aniga waxaan bixinayaa qiimaynta ugu sarraysa maanta aan ka hor maro dadaba dhammaan.
Warqad gaara u dir Soomaali
Raadi qoraalladuu qoray/qortay Soomaali
Nambarka Xubinka : 196
Wadanka : Garbahaarrey
ka qayb galka : 98
Calayhimis-salaam dhammaantoodba.Mahadsanid maxamad
Warqad gaara u dir mahirsudaani
Raadi qoraalladuu qoray/qortay mahirsudaani
Runtii intaasaan golaha wax ku bandhigayey laakiin fikraddan oo kale iguma soo dhicin.Ogow Maxammed inaad ka tahay halkan halyey laakiin magaca lagaaga hor maray.kkkkk. Mahadsanid saaxiib runtii waxaan kuu rajaynayaa horumar joogto ah.
Allahumma salli calaa muxammad wacalal anbiyaa'i jamiican. Aad ayaan kaaga mahad celinayaa qoraalkan cajiibka ah iyo xusuusinta dadku xusuusanayaanba.
Maashaa'allaah Maxammed waa qoraal fiican,Afrikaanna inuu fariisiyo waa habboonayd waanan kaaga mahad celinayaa.... Tan kale magaca waan kaaga tanaasulayaa siduu sheegay Amiin haddaad u baahantahay...kkkk. Dhallinyaradu way ku mahadsanyihiin afkaarohooda xorriyadda ku dhisan iyo asluubta.Mahadsanid mar kale.
Toosinta kilmadaha tusmaysan.
aadam, aan, allaahi, dulkifli, furqaan, gudbiyo, ibraahiim, idiin, ilaahay, ismaaciil, isxaaq, jecleestay, kitaabkiisa, luud, magacyada, muslimka, muxamed, nabiyada, nabiyu, nuux, salaanta, soo, walaalayaal, waxaan, xusay
Noocyada muujinta mowduuc Qiimee mowduucan
5 : Aad u fiican 4 : Fiican 3 : Dhexe 2 : Xun 1 : Aad u xun
Mowduuc cusub waad ku dari kartaa
Faylal ma raacin kartid
Waad awooddaa Inaad ka qaybgalkaagii wax ka beddesho
Daafac Nabi SCW Hassan hashi Gabayada 6 28-09-2012 03:09 PM